Posted by Kaung Kin Ko at 3:44 PM
Oh my goodness! What can I do for you not to forget me?
Anyway, you are not only good at poems but also well-composed and written in essays ... Love this.
Whether you are still forgetful or not, please remember that I never forget you even though I tend to forget sometimes :) I don't forget not to forget you. :D :P
ကောင်းတယ်။ စာတွေမရေးတာကြာပြီနော်။ အားလုံးအဆင်ပြေပါစေ။
အရပ်ပုပု ဆံပင်ကောက်ကောက်နဲ့ ချစ်သူဆိုတော့ ကိုယ့်များ ပြောလေသလားဆိုပြီး မသိမသာ ရင်ခုန်မလို့ ရှိသေးတယ် ဘီလူးမဆိုတော့ နေပါစေတော့ မောင်မောင်မေ့ရယ် .. နေပါစေတော့ကွယ် ။ (ဘယ်ရမလဲ တို့လဲ Valentine အမီ ပြန်ရေးမယ် .. တို့ချစ်သူအတွက်) တို့လဲ မေ့တတ်တယ်ဆိုတော့ .. ဘယ်လိုမှတ်ရကောင်းမလဲ ..ပိန်ပိန်ရှည်ရှည် ပဲလင်းမြွေ .. အဲ့လို ကောင်းလား ??? :D :P
ဘီလူးမကြီး နာရီကြည့် စောင့်နေတယ်။ အဲဒီလို မှတ်လာကြောင်း ပြန်မပြောပြ လိုက်ဘူးလား။ :D
ကောင်းကင်ကို ဆိုတာတော့ ကြားဖူးတာကြာပါပြီ။ အခုမှပဲ ရှာတွေ့တယ်...အတွေးလေးတွေ လှပါတယ်...ကာရန်လေးတွေ ချိတ်ပြီး ဆရာကြီး သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းရေးဟန်မျိုးရေးနိုင်တာ ဒီဘက်ကာလမှာ ရှားနေပြီ...ကလောင်သွားနဲ့ လူထုအကျိုးကို ဆောင်ရွက်နိုင်စေကြောင်း ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်...
မေ့တတ်တဲ့အကြောင်း အခုလိုရေးပြတော့လည်း ဖတ်လို့ အကောင်းသား။ တကယ်ကြုံရတဲ့သူသာ မချောင်တာ။
မေ့လိုက်မှ ကောင်းတာတွေလည်း အများကြီးရှိတယ်။
အကိုကောင်းကင်ကို အကြောင်းလား..မိုက်တယ်.. လာလည်သွားပါတယ်..:)